Momba anay - Vahaolana OMG
OMG Solutions - Manolotra vahaolana ara-teknolojia misimisy toa ny fisorohana ny fahalavoana, fanairana vonjy maika / fahantrana, mpanara-maso GPS ary fakantsary fiarovana. Mpikarakara a ho an'ny mpikarakara amin'ny fanalefahana ny enta-mavesatra ara-batana sy ara-pihetseham-po vokatry ny fitakiana fikarakarana ireo sembana na antitra.
vCare dia rafitra fanairana fiarovana azo ampiasaina ho an'ny be antitra, ao an-trano. Ny rafitra dia manome fitambarana fampiasana, ao anatin'izany ny fiarovana ny trano, fomba fiaina ara-pahasalamana ary fikarakarana ireo be antitra. Izy io dia mampiasa tambajotra roa (WiFi sy GSM / 3G na 4G) handefasana vaovao hamoahana fanairana - fomba tsotra, azo antoka ary haingana.
Na any amin'ny birao ianao na amin'ny dia any amin'ny raharaham-barotra any ivelany, dia miaraka aminao ny vCare. Azonao atao tsara ny mahalala ny toeran'ny rafitra fanairana matotrao, manara-maso ny tranonao ary hikarakara ny ray aman-dreninao. Azo atao aza ny manamarina ny hamandoana sy ny mari-pana ao amin'ny trano (na an-trano na any ivelany). Miaraka amin'ny vCare, azonao antoka ny fiarovana sy ny filaminanao.
Manakana ny fianjerana & fanarahana mora ny zokiolona
Wireless fakantsary fiarovana fakan-tsary
Ny Fanairana amin'ny Alalan'ny Fandrosoana dia mora ampiasaina: Mampifanaraka ny faharetan'ny fandriana fandriana, ny pensilihazo, na ny fandriana matory amin'ny fitsabahana amin'ny fisorohana ny aretina. Dia asio lamosina eo amin'ny fandriana iray na eo amin'ny sezany, eo ambaninà mponina mety hianjera na hivezivezy. Ny fandoavam-bolo matavy dia napetraka amin'ny fandriana na varavarana. Raha miezaka ny hitsangana ny mponina, dia nesorina teo am-pandriana na kofehy fitaratra ny tsindrin-tsoratra na nampidirina tao anaty balafomanga iray, izay mampitandrina mpikarakara iray amin'ny alàlan'ny fanairana heno, pagera mangina, fanairana an-dalamby, hazavana fiantsoana an-telefaona, manome fanampiana rehefa ilaina izany.
Dementia / Zokiolona / Zaza GPS Tracker & Fall Detector
74345 Total Views 32 Views Today